မန္တလေး စက်သုံးဆီ သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေး ဆိပ်ကမ်းအား တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ (Pilot Project) ဖြင့် ? - Yangon Media Group
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရမြို့နယ် စစ်ကိုင်းတံတားအဟောင်းအနီး ဒုဋ္ဌဝတီနှင့် ဧရာဝတီမြစ်တို့ပေါင်းစုံသော အိုးတုတ္ထတန်းနေရာတွင်လုပ်ဆောင်နေသည့် မန္တလေး စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးရေးဆိပ်ကမ်းအား တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ Pilot Project ဖြင့် လုပ် ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အစီအမံများဖြစ်သော EIA, SIA လုပ်ငန်းများ ထပ်မံဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စအား အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နံနက်က အမရပူရမြို့နယ် ဘုန်းတော်နိုင်ငံကျေးရွာရှိ စိုးစတားခန်းမ၌ကျင်းပသည့် စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် ထိခိုက်မှုနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လူထုတွေ့ဆုံပွဲမှသိရသည်။ ”စီမံကိန်းကရပ်နားထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ လုံးဝခွင့်ပြုထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ (Pilot Project)ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ တင်ပြထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို ကြီးကြပ်မှုကော်မတီလည်း ဖွဲ့ပေးထားတယ်။ ကျွန် တော်တို့လိုအပ်ချက်ကို ထပ်ပြီးလုပ်ခိုင်းမယ်။ စိတ်တိုင်းကျအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုမှ နောက်ထပ်ဆီကန်တွေကို ထပ်ပြီးခွင့်ပြုသွားဖို့ရှိတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း EIA,SIA တင်ပြချက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်း နေတုန်းပါ။ ဒါတွေလည်းပြီးစီးလာမယ်ဆိုရင် စီမံကိန်းကဆက်သွားမှာပါ”ဟု မြန်မာစွမ်းအင်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလိမိတက်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းမြင့်က ပြောသည်။
စက်သုံးဆီလုပ်ငန်းရှင်များ စုပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားသည့် မြန်မာ့ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလိမိတက်မှ စက်သုံးဆီသိုလှောင် ဖြန့်ဖြူးရေးဆိပ်ကမ်းကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလနှောင်း ပိုင်းမှစတင်၍ ၇ ရစ်ချက်စတာစကေးရှိ မြေငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှိစေရန် ပိုင်ရိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် ယာယီရပ်တန့်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့အများပိုင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးထားတဲ့ ကော်မတီအဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီး လိုအပ်ချက်ရှိတာတွေကို ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ ဒေသခံပြည်သူအ ကျိုးကိုလည်းရှေးရှုပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါ”ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ယခုအချိန်ထိ ရွှေကြက်ယက်ဆိပ်ကမ်း၌ စက်သုံးဆီသင်္ဘောများဖြင့် ဆီအတင်အချပြုလုပ်လျက်ရှိရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသာမက အထက်မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံး၏ စက်သုံးဆီလောင်စာများ ဝင်ထွက်သည့်နေရာဖြစ်ပြီး မီးဘေးအန္တရာယ် အလွန်စိုးရိမ်ရသည့်အတွက် အဆိုပါကုမ္ပဏီမှ ယခင်အစိုးရလက် ထက်တွင် ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံသည့် အိုးတုတ္ထတန်းအရပ်တွင် စက်သုံးဆီသိုလှောင်ဖြန့် ဖြူးရေးဆိပ်ကမ်းနေရာအဖြစ် စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”စီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအပေါ် ကုစားမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက် အပြည့်အစုံလုပ်ဖို့ပြောထားတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာ မျှခြေရှိအောင်လုပ်ရမယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း အဲဒီအမြင်ရှိဖို့လိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီး ဦးဇာနည်အောင်က ပြောသည်။
APACS-CU Open ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲ မြန်မာဝင်ပြိုင်မည်
”လူငယ်တွေရဲ့ ဇာတ်ကားတွေ ထွက်လာတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဟာသ ဇာတ်ကားတွေက ပြောင်းကိုပြောင်??